Ipheki Yokusebenzisana Yolimi ye-Windows (LIP) inikeza inguqulo ehunyushwe ingxenye yezindawo ezisebenziswa jikelele ze-Windows. Emva kokufaka i-LIP, izihloko zombhalo kuwizadi, amabhokisi omyalezo, amamenyu, Nosizo Nokusekela zizoboniswa kulimi lwe-LIP. Umbhalo ongahumushiwe uzoba uncwelana lolimi ye-Windows 8. Isibonelo, uma uthenge isilandiso se-Spanish se-Windows 8, futhi walayisha i-Catalan LIP, eminye imibhalo izohlala ikwi-Spanish. Ungafaka i-LIP edlula eyodwa kulimi lwesisekelo olulodwa. Ama-LIP e-Windows angafakwa kuzo zonke izinguqulo ze-Windows 8.
Izidingo zohlelo, cofa lapha
Cofa inkinobho yokuGcwalisa kuleli khasi ukuqala ukugcwalisa, noma ukukhetha ulimi oluhlukile kuhlu lokwehlisela-phansi.
Ukuqala ukulayisha manje, cofa Run.
Ukugcina ukugcwaliswa kwikhompyutha yakho ngokuthi ulayishe ngesinye isikhathi, cofa Gcina
Emva kwemiyalelo yokulayisha, cofa lapha